Waste Tire Pyrolysis Chirimwa
Batch Rudzi Waste Tire Pyrolysis Miti
Inoenderera Tsvina Tire Pyrolysis Miti
Waste Plastiki Pyrolysis Chirimwa
Imba yemarara pyrolysis chirimwa
Oilsludge Pyrolysis Chirimwa
Carbon Nhema Kukuya Midziyo
Waste Tire Kupwanya Zvishandiso
Waste Plastic Kupwanya Zvishandiso
Hot blast hita
Batch Rudzi Waste Tire Pyrol ...
Inoshandiswa kushandiswa kwesimba kwemarara epurasitiki. Kubudikidza nekuparara kwakazara kwema polymer epamusoro mumarara epurasitiki zvigadzirwa, vanodzokera kune mamorekuru madiki kana monomers kuburitsa mafuta emafuta uye akasimba mafuta. Pasi pekufungidzirwa kwekuchengeteka, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye kuenderera uye kugadzikana kushanda, iko Kugadzirisazve, kusakuvadza, uye kudzikisira marara epurasitiki. Kambani yemarara epurasitiki pyrolysis yekugadzira tambo inoshandisa yakasarudzika yakakombamirwa chinokonzeresa uye yakasarudzika yemubatanidzwa dechlorination mumiririri kubvisa magasi eacidiki senge hydrogen chloride inogadzirwa nekutsemuka kwePV panguva yakakodzera, kuwedzera hupenyu hwebasa remidziyo.
Ichaputswa zvidimbu zvetaya mushure mebhandi rekutakura, bhanhire chikero, sikuruu conveyor, nezvimwewo kune yakashata kumanikidza mune inoenderera pyrolysis sisitimu kuburikidza ne pyrolysis, mune system mushure megesi chikamu chekuita tembiricha 450-550 ℃ pasi pemamiriro ekutsvaira nekukurumidza pyrolysis maitiro, gadzira iyo pyrolysis mafuta, kabhoni nhema, waya wepyrolysis uye gasi rinotsva, gasi rinotsva nekuparadzaniswa kwemafuta uye gasi yekudzosa unit mushure mekupinda mune inopisa yekufema chitofu ichipisa, yeiyo yese yekugadzira system yekupa maitiro ekupisa, kuzadzisa kuzvigutsa. musimba;
Iyo tsvina tsvina yekugadzira yekugadzira tambo ndeye yakakura-chikamu chakazara seti yemidziyo iyo inonyatsopatsanura nhatu huru mbishi zvinhu zviri mune vhiri: rabha, simbi waya, uye fiber mukamuri tembiricha uye inoziva 100% kudzokorodza. Tsvina yekugadzira dhizaini yekugadzira inogona kudzokorora matairi mukati mehupamhi huwandu hwe400-3000mm zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvine simba rinoshanda, saizi yekuburitsa inogona kudzorwa mukati meyero ye5-100mm, uye kuburitsa kunogona kusvika 200-10000kg / h . Iyo yekugadzira tambo inomhanya pane tembiricha yemukati uye haizokonzere kusvibisa kwechipiri kune nharaunda. Iyo yekugadzira tambo inotora PLC yekudzora system, iri nyore kushanda nekuchengetedza, ine yakaderera simba rekushandisa uye hupenyu hwakareba hwebasa.
Boiler zvinopisa zvinoreva bhaira rinopisa, bhaira rinopisa mafuta uye gasi bhaira ndiyo inonyanya kukosha inotsigira michina yekubatsira, bhaira inopisa inonyanya kuganhurwa kuita mafuta anopisa uye gasi rinopisa uye huni huni zvinopisa, kusanganisira mafuta anopisa anogona kukamurwa kuita mwenje oiri unopisa uye mafuta anorema anopisa, mafuta akareruka anonyanya kureva dhiziri, mafuta anorema anoreva mafuta ekuchera peturu, mafuta edhiziri mushure memamwe mafuta anorema; Zvinopisa gasi zvinogona kugoverwa muzvinhu zvinopisa gasi, zvinopisa gasi reguta, zvinopisa zveLPG uye zvinopisa biogas.
inopisa blast hita
Icho chinopisa chinopisa chiravira rudzi rwemidziyo yekupisa ine kugona kwakanyanya uye simba rekuchengetedza. Iyo yekudziya mwero inokurumidza, uye zvinotora maminetsi makumi maviri chete kubva pakupisa kusvika kune yakajairika oparesheni.High degree of automation, tembiricha yemhepo inogona kugadziriswa zvechisimba mukati meyakatarwa renji. Mhepo inopisa yakatsiga uye tembiricha yekudzora kunyatso inogona kuva mukati me ± 5 ℃ .Safe uye yakavimbika, yakakwana chengetedzo mudziyo.
Plastiki crusher inoshandiswa zvakanyanya mukurasa marara epurasitiki uye fekitori epurasitiki marara ekudzokesa epurasitiki crusher mota simba pakati pe3,5 ne150 kilowatts, iyo yekucheka roller roller inomhanya kazhinji iri pakati pe150 ne500rpm, chimiro chine tangent chikafu, yepamusoro chikafu poindi; banga chinotenderera chakasiyana neicho chakasimba banga reroller uye mhango banga roller.
Zvishandiso nesaya crusher yakaputswa, pasi pechiito chebhaketi erevheta, yakatumirwa kune yekuchengetera bin, mushure mekushandisa yemagetsi kudedera feeder ichaendesa zvinhu zvakaenzana uye zvakarongeka kunaRaymond chigayo chekukuya, mushure mekukuya hupfu pasi pechiito cheanofuridzira anoridza kuongorora kwekusarudza muchina, mushure mekuparadzaniswa kwemidziyo kubva paipi kuenda kudutu guru kuti utore hupfu, gare gare mukuburitsa kwekuburitsa muromo, kupedzisa nzira yekukuya kabhoni nhema.
Iyo pyrolysis mafuta inogadzirwa nemarara epurasitiki uye marara vhiri yakasungwazve. Iyo hombe tekinoroji indekisi inogona kusvika pachiyero che0 # kana -10 # dhiziri mafuta uye inogona kushandiswa panzvimbo yekupedzisira. Mutengo wacho unogonawo kuwedzerwa ne $ 230 / tani kupfuura mafuta asina kuchena.
Iyo inoshandiswa pakuderedza, kurapwa kusingakuvadzi uye kushandiswa kwesimba sludge kuti uone kugadzirisa kwevhu. Nekuparadzanisa iyo mvura uye yehupenyu chinhu mune iyo sludge kubva muvhu, iyo yemamineral mafuta zvemukati mune yakasimba chigadzirwa mushure mekuparadzanisa kurapwa isingasviki 0 05%. Pasi pekufungidzirwa kwekuchengeteka, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye kuenderera uye kugadzikana kushanda, iyo Sludge Kuderedza, isina kukuvara kurapwa uye zviwanikwa mashandisiro.
Marara akasimba edhorobha nemarara akasimba emumba zvinowanzo kuve zvinoraswa zvekushandisa zvezuva nezuva.Iyi tsvina yakajairika inowanzoiswa mubhegi dema kana mubhini rine musanganiswa wezvinhu zvakanyorova uye zvakaomeswa zvinogadziriswa, zvakasikwa, zvisingaenzaniswi uye zvinogadziriswa zvigadzirwa.
Dhorobha dzimba marara uye tsvina yemumba zvinowanzo kuve nezvinhu zvakaraswa zvezuva nezuva. Mhando yemarara akajairika anowanzoiswa muhomwe nhema kana gaba remarara, iro rine musanganiswa wezvinhu zvakanyorova uye zvakaomeswa zvinogona kugadziriswazve, organic, inorganic uye biodegradable zvinhu.
Midziyo yekurapa yemarara inotsvakurudzwa uye kugadzirwa nekambani yedu yakazara zvoga kubva pakudyisa kusvika kumagumo maitiro ekugadzirisa. Inogona kugadzirisa matani 300-500 pazuva uye inongoda vanhu 3-5 kuti vashande. Iyo yese seti yemidziyo haidi moto, kemikari mbishi zvigadzirwa, uye mvura. Icho chirongwa chekuchengetedza zvakatipoteredza chinodzoserwa nenyika.
Iyo pyrolysis nzira ndeimwe yeakazara uye akakosha-akawedzera maitiro ekurapa kwemarara matai. Kubudikidza neiyo pyrolysis tekinoroji yemarara marapa ekurapa michina, mbishi zvinhu zvakaita semarara matai uye mapurasitiki epurasitiki zvinogona kugadziriswa kuwana mafuta, kabhoni nhema nhema nesimbi waya. Maitiro acho ane hunhu hwe zero kusvibiswa uye goho repamusoro remafuta.
513 Guangzhou North Road, Jiaozhou Guta, Qingdao, China
Zvinowanikwa Zvigadzirwa - Sitemap
Dongo Mapurasitiki Refinery, Tire Pyrolysis, Waste Tire Kudzokorora Muchina, Inoenderera Pyrolysis Miti, Plastiki Recycling Machine, Batch Pyrolysis Chirimwa,